FRANCE JIGIDE NDI NA-EGWU EGWU BOOBA NA KAARIS NA ULO UGBOELU
Home AKUKO UWA Akuko Ala Anyi
in Akuko Ala Anyi, AKUKO UWA
E nyere iwu abụọ buru ibu nke France, Booba na Kaaris ka ha nọrọ otu ọnwa n’ụlọ mkpọrọ mgbe agbarịta ụka n’etiti ha na ọchịchọ ha na-egbu oge ụgbọ elu na-eme ka a kwụsị ikpochapụ ụgbọ elu Paris.
Anụ ehi dị n’etiti kpakpando rap na ọdụ ụgbọ elu Orly gbapụrụ na Wednesday na ụlọ ezumike nká jupụtara na ndị ezumike, ụfọdụ n’ime ha na-esere ihe ahụ mere na telifon ha ka ndị na-alụ ọgụ na-ebu agha na ihe ncheta na ụlọ ahịa na-enweghị ọrụ.
NA-AGBAWA: AKPABIO ZUTERE BUHARI NA LONDON
Onye ikpe France nke Fraịde kwuru na “mkpesa dị n’etiti òtù abụọ ahụ” na ihe ize ndụ nke ime mgbanwe ọzọ pụtara na ndị na-eme ihe nkiri na ndị ọzọ itoolu ga-anọ na njide ruo mgbe ọzọ nụ na September 6.
“Ihe mere bụ ihe a na-apụghị ịkọwapụta, ụta,” ka Booba kwuru n’oge a na-anụ ihe, na-ekwu maka ezinụlọ na-ejegharị ejegharị, ndị ọrụ na ụmụaka ndị nọ n’ebe ahụ n’oge ahụ.
Kaaris kwuru na “ihe niile agaala, ihe niile dị jụụ” ugbu a.
Ndị na-eme ihe nkiri abụọ ahụ, bụ ndị a na-eme na mgbede Wednesday na Barcelona, na-eme mkpọtụ na mgbasa ozi mgbasa ozi ebe ụfọdụ ndị na-akwa ndị ọchịchị ọchị ma na-akpọ ha ka ha dozie esemokwu site na ọgụ.
Booba, 41, kwuru na ọ dabara na Kaaris, 38, n’oge gara aga mgbe ọ kwụsịrị ịkwado ya na esemokwu ya na onye ọrụ France bụ artist Rohff.
A mara Rohff ikpe na November ruo afọ ise maka ụlọ mkpọrọ maka mmeri ọjọọ na Booba.
Ndị ọkàiwu Kaaris Arash Derambarsh na Yacine Yakouti na-ekwu na “Booba” wepụrụ rapper ahụ, bụ onye kparịrị nwa ya na nwunye ya “, n’ihu ọtụtụ ndị” wụkwasịrị ya “.
OBASANJO GBARA IYI NA YA AGAGHI AKWADO ATIKU MAKA ONYEISI OCHE
Ọ gbakwunyere ndị na-eti mkpu na-eji ísì ụtọ na karama iko dịka ngwá agha.
Onye ọka iwu Booba Yann Le Bras zara site n’ịgwa BFM TV na eserese vidio gosiri na ọ bụ Kaaris na òtù ya nke àgwà ya “dị oke ike.”
Ọdụ ụgbọ elu Orly kwuru na agha ahụ mebiri ihe oyiyi Orly, “na-etinye ndụ ndị ọzọ n’ihe ize ndụ”, ọ na-abanyekwa n’ụlọ akwụkwọ ọha na eze mgbe ndị uwe ojii na-eme ka ndị ọchịchị kwụsị ime ụlọ ezumike. Air France emeela mkpesa.
Mmadụ iri na anọ ka e debere ya na ndị uweojii na Wednesday, ehihie na abụọ ka e nyere ha na Thursday ụtụtụ.
Ndị mkpọrọ ahụ chere ihu ruo afọ asaa n’ụlọ mkpọrọ na mma nke 100,000 euro.
Tags: boobaentertainmentIsimbidoISIMBIDO POSTisimbido postsisimbido tvisimbidopostISIMBIDOPOSTSISIMBIDOTVkaarisLATESTMUSICnewnewspostpostsupdateupdates
MMADU DABARA N’ONWU NA NKWUSI BOS NA LAGOS
MMADU DABARA N'ONWU NA NKWUSI BOS NA LAGOS